Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay Horumarinta Xoolo-Dhaqatada Iyo Ahmiyada Maalinta Xoolo-Dhaqatada. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Kahadlay Horumarinta Xoolo-Dhaqatada Iyo Ahmiyada Maalinta Xoolo-Dhaqatada.
Samara(CN) Axad.Jan.25.2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kahadlay ahmiyada iyo barnamijka horumarineed ee shacabka xoolo dhaqatada ah. Madaxwaynaha ayaa mar ay warbaahintu wax kawaydiisay arimaha xoolo-dhaqatada ayuu sheegay in xoolo-dhaqatada dalka horumar lataaban karo laga soo hoyiyay guud ahaanba qaab nololeedka iyo istaratiijiyadaha lagu horumarinayo.
Madaxwayne Cabdi Maxauud Cumar ayaa sheegay in ay istraatiijiyada ku aadan horumarka xoolo-dhaqatada ee dalka iyo deegaanka Somaalida Itoobiya ay tahay mid ka duulaysa qaab nololeedka shacabka iyo deegaanada ay ku noolyihiin. Madaxwaynaha ayaa carabka kudhuftay nidaamka xoolo-dhato-beeralaynimada iyo guulaha laga gaadhay, wuxuuna sheegay in dhibaatooyinka xoolo dhaqatadu ay ugu darnayd meelaha qaar dadka iyo xoolaha oo biyaha raadintooda hayaano dheer u gali jiray balse haatan dhamaan adeegayada iyo qaab nololeedkooda xooga laasaray.
Madaxwaynuhu waxaa kale oo tilmaan kabixiyay guulaha laga gaadhay kasakow in qorshaha shanta sano ee wareegiisii labaad lagalayo uu sii xoojin doono horumarinta xoolo dhaqatada haday tahay adeega iyo haday noqoto suuq yeelida ama guud ahaanba siyaasada xoolo dhaqatada oo muhiim u ah bulshada.
Madaxwayanaha ayaa sidoo kale ka hadlay ahmiyada maalinan 17-ka bisha Dir oo uu tilmaamay in ay tahay mid door muhiima ku leh horumarinta bulshadada xoolo-dhaqatada ah taasoo dhiiri galinaysa islamarkaana kor u qaadysa heerka iyo baarnaamijyada xoolo dhaqatada ee dalka iyo deegaanada.
Waxaana xusid mudan in madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar uu si fool-ka-fool ah ula kulmo kuna ogaado markasta xaalada nololeed ee bulshada xoolo dhaqatada ah isagoo madaxwaynuhu in badan miyiga daraas iyo qorshayaal wax lagaga badalo kakeenay deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Hadaba deegaanka Soomaalida ayaa xuska 16 aad ee maalinta xoolo dhaqatada qabanaya taasoo noqonaysa markii labaad ee uu deegaanka lagu qabto. Bulshada xoolo dhaqatada ah ayaa waxaa Itoobiya ugu badan deegaanada Soomaalida, Canfarta, Oromada iyo Shucuubta Koonfureed. Maalinta 17-ka Dir ee ahmiyada qaran loo siiyay xoolo-dhaqatada ayaa muhiimad wayn ugu fadhida dhamaan bulshada reer Itoobiya gaar ahaan xoolo-dhaqatada.